02/07/2019 Thu Yay 0
စားသုံးရန်မသင့်တဲ့ စားသောက်ကုန်(၂၁)မျိုးကိုFDAမှထုတ်ပြန် စားသောက်ကုန်တွေက ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ခွင့်မပြုဆိုးဆေးများ၊ တာရှည်ခံဓာတုဆေးများပါဝင်ခြင်းတို့ကြောင့် စားသုံးရန်မသင့်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါ။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန (FDA)မှ ပြည်သူများစားသုံးရန်မသင့်တဲ့ စားသောက်ကုန် (၂၁)မျိုးကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ဇူလိုင်လ(၂)ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာပါ။ စားသုံးရန်မသင့်ကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစားအသောက် (၂၁)မျိုးကတော့ (ရှမ်းကြီးအမှတ်တံဆိပ်ပါ) ပဲကြီးလှော်၊ ( ကောင်းကောင်းအမှတ်တံဆိပ်ပါ) ငရုတ်သီးမှုန့်၊ ( နိုင်အမှတ်တံဆိပ်ပါ) Continuous reading
လူကြီးပိုင်းအရွယ်များ ဦးနှောက် သွေးကြော မပြတ်စေရန် သတိထားသင့်တဲ့ အချက်များ
လူကြီးပိုင်းအရွယ်များ ဦးနှောက် သွေးကြော မပြတ်စေရန် သတိထားသင့်တဲ့ အချက်များ သွေးလေမညီညွှတ်မှုတွေကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့ အဖြစ်တွေကနေ ကာကွယ်ပေး၊ ကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့ ဒီနည်းလမ်းက အသက် (၅၀) နဲ့အထက် အရွယ်က စပြီး သိထားသင့်၊ ကျင့်သုံးသင့်တဲ့နည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံ တစ်ပြားတစ်ချပ်မှလည်း မကုန်ဘူး။ သုတေတနပြုချက်အရ နှလုံးခုန်နှုန်းတွေကို Continuous reading
ဘာသာတရားလုပ်ပြီး သေခြင်းကောင်းဖို့အတွက်ပဲ ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့ ကစ်ကစ်
02/07/2019 KPST 0
ဘာသာတရားလုပ်ပြီး သေခြင်းကောင်းဖို့အတွက်ပဲ ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့ ကစ်ကစ် ပရိသတ်တွေ အားပေးမှု ရထားပြီး ရုပ်ရှင်ကားတိုင်း လိုလိုမှာ ပါဝင်တတ်တဲ့ ဇာတ်ပို့ ဇာတ်ရံ သရုပ်ဆောင် ကစ်ကစ်ကတော့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် အနုပညာ လောကကနေ အနားယူနေရသလို ဆေးရုံနဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာပဲ လှဲနေရတဲ့ အချိန်တွေ အတော်ကြာနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Continuous reading
အာရုံကြောအားနည်းရခြင်း အကြောင်းရင်း ( ၇ ) ချက် ။ . ။
အာရုံကြောအားနည်းရခြင်း အကြောင်းရင်း ( ၇ ) ချက် ။ . ။ အာရုံကြောအားနည်းခြင်း ( Neuropathy ) မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်သော ဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ ထို့ကြောင့် အာရုံကြော အားနည်းသူ တစ်ဦးကို မည့်သည့် အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်ရသည်ကို တိကျစွာ Continuous reading
သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားသက်ငယ်မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ခံရတဲ့ နေပြည်တော် WISDOM HILL မူကြို ခေတ္တပိတ်လိုက်ပြီ
သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားသက်ငယ်မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ခံရတဲ့ နေပြည်တော် WISDOM HILL မူကြို ခေတ္တပိတ်လိုက်ပြီ အသက် ၃ နှစ် မပြည့်သေးတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ဦး မုဒိမ်းကျင့် ခံရတယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖြေရှင်း နေရတဲ့ နေပြည်တော်က နာမည်ကြီး ပုဂ္ဂလိက မူကြိုကျောင်း Wisdom Continuous reading
အနန္တ ဖောင်ဒေးရှင်းတည်ထောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ ညိုမင်းလွင်
အနန္တ ဖောင်ဒေးရှင်းတည်ထောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ ညိုမင်းလွင် ဒါရိုက်တာ ညိုမင်းလွင်ဟာ အထူးပြုလုပ်ချက်တွေနဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖန်တီးဖို့ အစီအစဉ်ရှိပြီး ထုတ်လုပ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေသူတွေကို အနန္တဖောင်ဒေးရှင်းထူထောင်ပြီး ကူညီပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ညိုမင်းလွင်ဟာ မကြာခင်ရုံတင်ပြသတော့မယ့် ‘’အနန္တ’’ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခု တည်ထောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီဖောင်ဒေးရှင်းကနေ အိုင်ဒီယာကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေကို ထုတ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေသူတွေအတွက် ထောက်ပံ့ပေးသွားဦးမယ်လို့လည်း Duwun Media Continuous reading
ကျိုက်ထီးရိုးဆံတော်ရှင်စေတီတော် သမိုင်း စေတီတော် တည်ထားပုံ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်ရှိ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်သည် အရှေ့ရိုးမတောင်တန်း အပါအဝင်ဖြစ်သော ပေါင်းလောင်းတောင်ပေါ်တွင် တည်ရှိ၍မြန်မာနိုင်ငံရှိ တန်ခိုးကြီးသော စေတီတစ်ဆူဖြစ်သည်။ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီကို အစွဲပြု၍ စေတီတော်တည်ရှိရာတောင်ကို ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ဟုခေါ်ကြသည်။ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီ တည်ရှိရာတောင်ထွက်မှ ပင်လယ်ပြင်ရေအမြင့်ပေ ၃၆၀၀ ခန့်မြင့်သည်။ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော် တည်နေပုံမှာ အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းလှသည်။ ကြီးမား၍ Continuous reading
မန်ဟက်တန်က လမ်းမတွေပေါ်မှာ ဒေါသဖြေစရာ ထိုးအိတ်တွေ ထားရှိ
မန်ဟက်တန်က လမ်းမတွေပေါ်မှာ ဒေါသဖြေစရာ ထိုးအိတ်တွေ ထားရှိ ပုထုဇဉ်မှန်သမျှဟာ လောဘ၊ ဒေါသ မကင်းနိုင်ကြသလို နေ့စဉ်လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရတဲ့ ဘဝမှာလည်း စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှု တွေဟာ မကြာခဏဆိုသလို ကြုံတွေ့နေကြရတာပါ။ အထူးသဖြင့် ဒေါသ ထွက်လာတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် စိတ်တွေ မွန်းကြပ်လာတဲ့ အခါ လူတွေအတွက် ထွက်ပေါက်တစ်ခုခု Continuous reading
မိ သား စု ထ မင်း ဝိုင်း လေး ရဲ့ အ ဓိ ပ္ပာ ယ်
မိ သား စု ထ မင်း ဝိုင်း လေး ရဲ့ အ ဓိ ပ္ပာ ယ် ထ မင်း ဝိုင်း လို့ ခေါင်း စီး လေး တွေ့ လိုက် တာ နဲ့ လူ တိုင်း Continuous reading